Sailfish 3.1: izvi ndizvo zvatinopihwa neiyi nharembozha | Linux Vakapindwa muropa
The company Jolla Anozivisa Kuburitswa kweSailfish 3.1 Inoshanda Sisitimu iripi iyi vhezheni itsva yakagadzirira Jolla 1, Jolla C, Sony Xperia X, zvishandiso zveGemini uye ivo vatove vanowanikwa muchimiro chekuvandudza kweOTA.
Kune avo vachiri kusaziva nezve Sailfish OS vanofanirwa kuziva chiie izvi zvinoshandisa girafu rakatarwa zvichibva Wayland uye Qt5 raibhurari, mamiriro ezvinhu ehurongwa akavakirwa panheyo yeMer, iyo yakagadziriswa sechikamu chakakosha cheSailfish kubva munaKubvumbi, uye mapakeji eNemo.
Chinhu chinonakidza nezve Sailfish OS ndechekuti iri hurongwa hwave huri mukuona kwema greats, senge nyaya yaHuawei kuti panguva iyoyo (mavhiki mashoma apfuura) nekuda kwedambudziko rakamuka nechirambidzo cheUS, yakanga isisakwanise kushandisa Android mumidziyo yayo mitsva iyo yaigadzira.
Nekuda kweiyi mamiriro mushure memazuva mashoma Russia yakaburitsa nhau kuti iri kuronga kuburitsa Astra Linux mukati memidziyo inoshandiswa nevakuru vakuru uyezve gare gare nevashandi veveruzhinji munyika yese.
Russia kuvhura mafoni uye mahwendefa ane Astra Linux munaGunyana
Kunyangwe zvakaziviswa zvakare kuti Aurora (Sailfish forogo) yeizvi mukati mechikamu chinoshandiswa mukufamba uku neRussia. Nezvo izvi, hatigone kufuratira ino system iyo pasina mubvunzo inogona kupa zvakawanda mune izvi.
Main nyowani maficha eSailfish 3.1
Nokuburitswa kweshanduro iyi nyowani tinogona kuona kuti chimiro chemazhinji mafomu ekushandisa akachinjwa, kusanganisira vanhu, foni, mameseji, uye wachi, izvo zvakagadziridzwa kuratidza zvazvino kuitika mune mobile interface dhizaini.
Pamwe pamwe nekushandurwa uku akawedzera rutsigiro rwekunyorera data remushandisi pane dhiraivha (Chikamu cheKumba) pamwe nekuwedzera kweminwe.
Gwaro, PDF, spreadsheet uye vataridzi vemharidzo vakagadziridzwa. Wakawedzera rutsigiro rwekuvhura akajeka mavara mafaira. Yakagadziriswa nyaya ine encoding RTF mafaera.
Mukushandisa kweemail, iko kugona kusarudza kwekutumira mameseji nesiginicha yedhijitari uchishandisa PGP yakawedzerwa.
Wakawedzera kugona ("Zvirongwa> Zviratidzo> Ratidza matipi uye kuraira") kudzima kuratidzwa kwemameseji pamwe nemazano;
Chirongwa chemutumwa chakagadzirisazve tambo yehurukuro, akawedzera musoro nedata remugashi uye akawedzera rutsigiro rwekuchengetedza kana kugadzirisa zvakapinda mubhuku rekero pasina kubuda kunyorera;
Bhuku reKero revanhu rakagadzirwazve, iyo inopatsanura zvikamu zvekutsvaga, kutarisa, uye kugadzirisa iye anogamuchira. Irwo runyorwa rwekuonana rwakagadzirwazve patsva nemavara.
Iyo inogadziriswazve interface yekutumira uye yekugamuchira mafoni yakakamurwa kuita matatu matabo: Dialer, Nhoroondo uye Vanhu. Dhayera yakagadziridzwa kudzora ruoko rwakabata foni.
Zvakareruka uye zvemberi kuratidzwa kwenhoroondo yekufona yakawedzerwawo Bhatani rakawedzerwa kune idzva rekufona dialog dialog kuti ikurumidze kutumira yakatsanangurwa meseji kuti upindure.
Kutanga kuvhura kweApple maapplication kwakagadziridzwa, mune iyo zvigunwe zvigadziriso zvinogoneka, iyo TLS 1.2 app inogoneswa nekukasira, kugona kuwedzera mafoni kubva kuAppleapps (semuenzaniso Whatsapp) kunoitwa kune iyo People app, uye nyaya dzinogadziriswa nekutanga WhatsApp neTeregiramu.
Yeimwe shanduko mune iyi nyowani vhezheni inomira pachena:
Kuvandudzwa kwekusurukirwa kwemaitiro APIs uye akasiyana masisitimu
Tsigiro yeWebGL inogoneswa mubrowser
Iyo kalendari scheduler ine mukana wekutumira makokero kuburikidza neAlexSSnc
Mune iko kunyorera kushanda nekamera, iyo-inobata pikicha zoom basa yawedzerwa
Pane iyo wachi, nguva, maaramu wachi uye masitopu mawatch akagadzirwa sematanho akapatsanurwa
Bluez Bluetooth stack yakagadziridzwa kune vhezheni 5.50.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Sailfish 3.1: izvi ndizvo zvatinopihwa neiyi nharembozha yekushandisa
Red Hat naFedora vakaburitsa yekutanga preview vhezheni yeFedora CoreOS